उद्योग वाणिज्य संघलाई आफ्नै हो भनेर सहयोग गरिदिन आग्रहः रमेश श्रेष्ठ — KhabarTweet::Nepali online news portal उद्योग वाणिज्य संघलाई आफ्नै हो भनेर सहयोग गरिदिन आग्रहः रमेश श्रेष्ठ — KhabarTweet
अहिले सम्म आराम नै छु ।
केमा व्यास्त हुनुहुन्छ ?
आफ्नै पेशा व्यावसायमा व्यास्त छु ।
उद्योग वाणिज्य संघमा आउनु भएको ३ बर्ष पुरा भईसकेको छ उपलब्धीहरु के के भए ?
यहाँका व्यापारी व्यावसायीहरुलाई सहज गर्ने अस्थाई प्यान नम्बर दिने व्यावस्था , धरान धनकुटा गएर तिर्नू पर्ने करहरु यहाँबाट शंकलन गरेर तिरिदिने व्यावस्था मिलाएक छौं । घरेलु, कोलेनिकामा दर्ता भएका व्यापार व्यावसायीहरुलाई पनि समन्वय गरेर यहिंबाट कर तिर्ने व्यावस्था मिलाएका छौं । उपलब्धीहरु यस्तै यस्तै भईरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघलाई यहाँका व्यापारी साथै स्थानीयहरुको साथ सहयोग कतिको छ ?
यहाँका व्यापार व्यापारीहरुको साथ सहयोग राम्रै छ बाहिर बाट आउने आगन्तुक अथितिहरुलाई स्वगत गर्ने कार्यहरुमा एकजुट हुनुहुन्छ । उद्योग बाणिज्य संघले गरेको निर्णयहरु यहाँका स्थानीय तथा व्यापारीहरुले साथ सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
उद्योग बाणिज्य संघले हाल सम्म कति पटक बजार अनुगमन गर्यो ?
३ बर्षको अवधीमा ५–६ पटक भएको छ भौगोलिक कठिनाईका कारण केहि समस्यहरु निम्तिन्छन् । जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कर कार्यालयका प्रतिनिधीहरुलाई यहाँ सम्म ल्याउन सकिने अवस्था पनी निकै समस्या हुन्छ तर पनि बजार अनुगमन भईरहेको छ । अनुगमनमा केहि त्रुटिहरु पनि भएका छन् । तिनिहरुलाई सुधार गरेर अहिले हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।
बजार अनुगमन ५–६ पटक भईरहँदा पनि मिति सकिएको र केहि अव्यावस्थित भएको देखिन्छ के कारण यस्तो भएको होला ?
हामी केहि भौगोलिक विकटताका कारण पिडित छौं बाहिरबाट यहाँसम्म सामानहरु आईपुग्दा नै मिति सकिएको हुन्छ । अरुणमा पक्की पुल नहुँदा ढुवानी गर्न केहि समस्य छ बाहिर बाट सामान पठाउने व्याक्तिहरुले पनि दुर्गम भनेर हेलचेक्रई गरेर त्यस्ता सामान पठाएको होकी भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । यदि अरुण नदीमा पक्की पुल हुने हो भने पनि यो समस्याको समाधान हुन्छ । पुल नभएकै कारण धेरै दिन सामान त्यहि राख्न पनि वाध्य छौं पुल नभएकै कारण यातायातको सुविधादेखि वञ्चित छौंं । यसमा सम्बन्धित व्याक्तिहरु राजनितिक दलका नेताहरु सांसदहरुले पहल गरे उपभोक्ता र व्यापर व्यावसायीहरुले यस्तो समस्या भोग्नु पर्ने थिएन । तर उद्योग वाणिज्य संघले के भनेको छ भने आफैले पनि सामानहरु बिचार गरेर हेरेर बेच्ने गरौं आम सर्वसाधरण जस्तै हामी पनि उपभोक्ता पनि हौं । त्यसकारण आफैलाई पनि उपभोक्ता सम्झेर सामान बेच्ने हो भने सुधार हुन्छ र अब यो तरिकाले हामी अगाडी बढ्ने छौं ।
दिंला बजारमा पेट्रोलीयम पदार्थ मनपरी दरमा बेचेको भन्ने आरोप छ नि ?
पक्कै पनि हो यहाँ हामी सबैलाई थाह नै छ यहाँ यातायातको सुविधा छैन । तत्कालको अवस्थामा पेट्रोल पम्प खोलेर सेवा दिन धेरैनै समस्या छ यहाँ केन्द्रिय बाटो जोडिन सकेको छैन । पेट्रोल पम्प खोल्न करोडौं लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन गाह्रो छ । यसको विकल्पमा हामीले यस्तो पदार्थ बेच्न बजार भन्दा केहि बाहिर लगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नगरपालिका कुनै सम्बन्धित निकाएमा गएर दर्ता गरेर उपभोक्तालाई सेवा दिईनु पर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
उद्योग वाणिज्य संघले निर्धारण गरेको वस्तु मूल्य सुची दिनु भएको छ ?
यसको हामी प्रयासमा छौं प्यान कार्डहरु दिने व्यावस्था र मुल्य सुचिहरु उपलब्ध गराउने तयारी गरि रहेका छौं ।
मूल्य सुची नभएको कारण पनि मनपरी दरले बजारमा सामानहरु बेचिरहेको होकी ?
अन्य बस्तुको मुल्य सुची दिने र मुल्य निर्धारण गर्ने बिषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौं र त्यस्तो आफुखुसिको दरमा बस्तु विक्रि भएको छैन तर पेट्रोलिय पदार्थको हकमा हामीले मूल्य तोक्ने बिषय हामी संग सम्बन्धित हुदैन यसलाई सम्बन्धित निकाएहरुले अनुगमन तथा निरिक्षण गरिनु पर्छ ।
अब बजारमा रहेको व्यापारी साथीहरुलाई उद्योग वाणिज्य संघ दिङ्ला शाखा हामी तपाई सबैको हो । दर्ता भएका वा दर्ता नभएका व्यापार व्यावसायहरु दर्ता गरि करको दायरामा आएर सहयोग गरि दिनुहुन र कुनै समस्याहरु भएमा हामी सबै मिलेर छलफल गरेर अगाडी बडौं समस्यहरु आई पर्छन तर त्यसको समाधान तापाई हामीलेनै गर्न सम्भव भएकोले यसमा हाम्रो हो भन्ने भावनाले उद्योग वाणिज्य संघ दिङ्ला शाखालाई सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु ।
कुराकानीको लागि समय दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद ।
तपईँलाई अनि दिङ्ला साप्ताहिक खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा ।